Waa Heshiiska Xaqiiqda Ah, Waqti Kaliya Ayaa Inaga Xiga Inta Uu David De Gea Ku Biirayo Real Madrid, Layaab Ayay Igu Noqon Doontaa Haddii Aanu Wareegin. – GOOL24.NET
Waa Heshiiska Xaqiiqda Ah, Waqti Kaliya Ayaa Inaga Xiga Inta Uu David De Gea Ku Biirayo Real Madrid, Layaab Ayay Igu Noqon Doontaa Haddii Aanu Wareegin.
Khabiirka Sky Sports ee Craig Bellamy ayaa barnaamijka dooda waxa uu ka sheegay in Real Madrid ay la wareegi doonto goolhayaha Manchester United ee David De Gea isla markaana waqti kaliyi uu inaga xigo inta uu heshiiskaasi suurtogal noqonayo. Craig Bellamy ayaa aaminsan in xaalada Real Madrid iyo dib u dhiska ay u baahan tahay uu sabab wayn u noqon doono in De Gea oo markii horeba doonayay Madrid uu Bernabeu ku biiri doono.
Craig Bellamy oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Isagu waa heshiiska dhabta ah, isla markaana anigu waxaan goor kasta dareensanaa in Real Madrid ay isaga raadinayso si uu sanado badan ugu noqdo No.1-ka. Kaliya waqti ayaa inaga xiga ka hor inta ayna helin isaga”.
Craig Bellamy oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi: “Farsamada lugtiisu waa cajiib, sidoo kale isaguna wuu rajaynayaa, waxa uu akhrisan karaa gool dhaliyaasha isla markaana haddii aad daawato, waxa uu badbaadino badan ku sameeyaa lugtiisa, isagu waa mid cajiib ah”.
Intaa kadib Craig Bellamy ayaa barnaamijka dooda Sky Sports ka sheegay in koox kasta oo wayni ay dib u dhis samayso balse dib u dhiska Madrid uu soo daahiyay guulihii ay Champions League ka gaadhay balse ay hadda samayn doonto.
Craig Bellamy oo arintan ka hadlaya ayaa yidhi: “Caadiyan koox kasta oo wayni dib u dhis ayay samaysaa, laga yabee in ay soo yara daahday Madrid, sababtoo ah guulihii ay ka soo gaadhay Champions League. Laakiin anigu waxaan arkaa De Gea oo taas qayb wayn ka noqonaya iyo Real Madrid oo lacag kharash garaynaysa, markasta way sameeyaan, sanadihii ugu danbeeyay way aamusnaayeen”.
Ugu danbayn Craig Bellamy ayaa xusay in si ay Real Madrid u hesho David De Gea ay u baahan doonto in lacag badan ay kharash garayso wuxuuna yidhi: “Sidaa daraadeed, ugu dhawaan xaqiiqda jirta lacag badan ayay ku qaadan doontaa in ay isaga hesho iyo in ay Man United ka qaadato, aniga layaab ayay igu noqon doontaa haddii aanu isagu tagin”.
Real Madrid ayaa daqiiqadihii ugu danbeeyay ee suuqii xagaagii 2015 kii ku fashilantay dhamaystirka heshiiskii guuldaraystay ee uu De Gea ku noqon lahaa ciayartoyda Real Madrid ah iyada oo wax walba dhamaystirnaayeen balse uu suuqu xidhmay iyada oo aan waraaqaha xidhiidhada labada dal la saxiixin.
Laakiin Real Madrid ayaa dhamaadka xili ciyaareedkan diyaar u ah in ay kooxdeeda ku samayso isbadalo waa wayn iyada oo goolhaye uu muhiimada kowaad u yahay Florentino Perez iyo maamulkiisa Bernabeu.